समाचार - कसरी तपाइँको व्यावसाय बाहिर व्यापारको विज्ञापन
धेरै कम्पनीहरूले शाब्दिक विज्ञापन गरीरहेको छ कम गुणवत्ताको साइनेजको साथ। यी कम्पनीहरूले यस प्रकारको साइनेजेजले गर्न सक्ने अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव महसुस गर्न सक्दैन।
सिनसिनाटी विश्वविद्यालयमा लिन्डनर कलेज अफ बिजनेसका डा। जेम्स जे। केल्लारसले हालसालै गरेको अध्ययनले उच्च गुणस्तरको साइनेजको ठोस महत्त्वलाई प्रकाश पार्न मद्दत गर्दछ। अध्ययनका निष्कर्षहरूले उपभोक्ताहरूलाई बारम्बार साइनेज क्वालिटीबाट व्यवसायको गुणस्तर अनुमान गर्दछ। र त्यो गुणस्तरको धारणाले अक्सर अन्य उपभोक्ता निर्णयहरूमा पुर्‍याउँछ।
उदाहरण को लागी, यस गुणवत्ता अनुमान अक्सर एक ग्राहक प्रवेश गर्न को लागी वा पहिलो पटक एक व्यापार प्रवेश गर्न को नेतृत्व मा नेतृत्व गर्दछ। लगातार नयाँ ग्राहक फुटको यातायात निर्माण एक लाभदायक खुद्रा स्टोर को लागी एक महत्वपूर्ण मेट्रिक हो। यो ठूलो स्तरको राष्ट्रिय अध्ययनले संकेत गर्दछ कि उच्च गुणस्तरको साइनेजले त्यो उद्देश्यसँग मद्दत गर्दछ।
यस सन्दर्भमा, "साइनेज क्वालिटी" भनेको व्यवसाय साइनेजको शारीरिक अवस्था मात्र होईन। यसले समग्र सिग्नेज डिजाइन र उपयोगितालाई पनि बुझाउन सक्दछ। उदाहरणको लागि, अध्ययनले यो भन्छ कि सुगमता उपभोक्ता साइनेज गुणस्तर धारणाको अर्को क्षेत्र हो, र .5१..5% मानिसहरू निराश र चिन्तित हुने रिपोर्ट गर्दछ जब साइनेज पाठ पढ्नको लागि अत्यन्त सानो हुन्छ।
थप रूपमा, गुणले ब्यापारको त्यो प्रकारको लागि समग्र सिग्नेज डिजाइनको उपयुक्ततालाई पनि संकेत गर्न सक्छ। 85 85..7% अध्ययनकर्ताले भने कि "साइनेजले व्यवसायको व्यक्तित्व वा चरित्रलाई व्यक्त गर्न सक्छ।"
यस अध्ययनको डाटाको विपरित पक्षलाई विचार गर्न, कम गुणस्तरको साइनेज व्यवसायको बाहिरको विज्ञापनको एक तरीका मान्न सकिन्छ। अध्ययनले भन्छ कि .8 35..8% उपभोक्ताहरू यसको हस्ताक्षरको गुणस्तरको आधारमा अपरिचित स्टोरमा खिचेका छन्। यदि एक व्यापारले कम सम्भावित नयाँ ग्राहक फुटको ट्राफिकको कम गुणस्तरको स due्केतको कारण गुमायो भने, त्यो बिक्रीको राजस्व हराउनेमा कति अनुवाद गर्दछ? त्यस दृष्टिकोणबाट, कम गुणस्तरको साइनेज दिवालियापनको लागि द्रुत ट्र्याक मान्न सकिन्छ।
कसले सोचेको छ कि ब्यापारले व्यवसायबाट बाहिर निस्कन सक्छ? सम्पूर्ण विचार आवाश्यक छैन जस्तो देखिन्छ, तर हालको उद्योग अनुसन्धानले कम गुणवत्ता साइनेजको साथ यो हुन सक्छ सुझाव दिन्छ।
तलको रूपमा राम्रो संकेतः
पोष्ट समय: अगस्त ११-२०२०